I-WOWOW Pot Filler Commercial Wall Mount Faucet Matte Black Pasta Arm Faucet - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / WOWOW Pot Pot Filler Commercial Wall Mount Faucet Matte Black Pasta Ingalo ompompi
WOWOW Embizeni Filler Commercial Wall Mount isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Matte Black Pasta Ingalo ompompi
Ama-Pot Fillers Wall MountIntambo yokuxhuma engu-1/2 (usayizi ojwayelekile wase-US), udonga olulodwa lomgodi wokufaka imbiza yokugcwalisa, ilungele kuphela amanzi abandayo (hhayi umxube). Onke amakhithi wokufaka afakiwe kuphakheji.
I-Stretchable Folding FaucetI-360 ° ejikelezayo yokwakhiwa kwengalo yenza kube lula ukugcwalisa imikhumbi yokupheka ngqo, asikho isidingo sokuhamba usuka kusinki uye esitofini. Ungasonga odongeni lapho ungasetshenziswa, ngaleyo ndlela ugcine isikhala sasekhishini.
I-Brass Pot Filler Matte Omnyama: Yenziwe nge-100% yekhwalithi ephezulu yethusi, i-anti-rust kanye ne-non-corrosion, iqinisekisa ukuqina nokuhlanzwa okulula. Ngobuso obupholile obungaphakathi, buqinile futhi abukho ukuvuza. Ukuqedwa okumnyama kweMatte, ubufakazi beminwe nokuvimbela i-oxidization.
I-Neoperl Aerator: Ifakwe i-aerator esezingeni eliphezulu yeNeoperl ABS, idala ukusakazwa okuphelele kwe-aerated, ukuthula nokungahlakazeki. Ngaphezu kwalokho, kungakusiza ukonga amanzi!
Iwaranti, Inkonzo Yamakhasimende: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emihlanu nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi esifanele. Imbozwe ukubuyiselwa okulinganiselwe kwezinsuku ezingama-5. Sicela uxhumane nathi nge-oda lakho, sizozama konke okusemandleni ukukusiza.
I-WOWOW Filler Faucet Folding 2311100RB: Ibhodlela lokugcwalisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ifreyimu yethusi ye-premium yomzimba wompompi, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esinendwangu ephezulu kakhulu, ukumelana nokuklwebheka, okulula ukuwasha, ithusi elicwengekileyo kakhulu, elinamandla, elingenamthofu, elinokumelana nokugqwala. Iminwe yeminwe iyamelana, ihlala isikhathi eside, ukuphepha kwemvelo kanye nempilo.
Ngokusikeka okungabonakali kanye ne-flair yezimboni, lokhu kucofa kwe-kettle kungenzeka ukwenza isitatimende esihle kakhulu ekhishini lakho. Ukwakheka kwe-wall faucet wall-Mount kushiya isikhala esiningi se-counter somsebenzi we-prep, ukuhlangana okuphindwe kabili kwalesi isikulufu isithupha kanye nokuphuma kwe-spinout engu-360 kunezela ukugcwala ukuze wenelise imicu yakho ye-ledge ngenkathi isitofu noma i-cooktop bese ugeza udonga ngaphandle.
Ikhishi lokugcwalisa ibhodwe lekhishi elinokwakheka kokusebenza nokusebenza: Kunama-valve amabili nje kuphela wesilawuli sokugeleza okubili, ispout esihlanganisiwe esiphindwe kabili sifinyelela ku-20 ″, kanti umpompi wensimbi ongagqwali usebenza ngaphandle uma ungasetshenziswa. Ukugcwalisa obhasikidi bakho cishe nganoma iziphi izidingo zokupheka akukaze kube lula kunokusebenzisa okugcwalisa ihlumela. Ukusetha okhethekile kodonga kuvumela isikhala esingeziwe ku-counter yakho ngenkathi ngasikhathi sinye sinikeza inzuzo ehlukile.
Ikhishi lompompi lasesinkini elilinganiselwe NGOKUKHULULEKA KWAMANZI AMANZI: Isibambo sompompi esisodwa esifakwe i-neoperl aerator sinikeza ingcindezi engapheli kanye nomsele wamanzi oqondile njalo.
UKUFAKA KAKHULU kanye NESIQINISEKISO SONYAKA O-3: Usayizi wentambo wale ompompi ngu-1/2 ″ NPS futhi ungafakelwa i-1/2 ″ NPS kuzixhumi ze-1/2 NPT, zisebenzisela amanzi abandayo nje. Kulula ukusetha kusetshenziswa ukusonta kweheksagoni. Sicela uxhumane nathi uma unemibuzo.
Isitifiketi se-ceramic se-NSF sinikeza ukusebenza kwe-drip-free: Igobolondo le-ceramic elingenamthofu ligunyazwa yi-NSF, lenza isiqiniseko sokuthi ubuningi bomthofu ekusakazeni kwamanzi kuhambisana nezinga lokuphepha, kunciphisa ukulimala kokuqondisa nokuvikela obathandayo. Amaphayiphu e-ceramic ajika kalula. Ayikho ivolumu exakile lapho amanzi egeleza.
Idizayini engaphelelwa isikhathi Ngokuhambisana nobuchwepheshe bamuva: Ngamalunga amabili ajikelezayo, inika amandla ukugcwaliswa kwehlumela ukuphuma endleleni lapho kungasetshenziswa. Ingafinyelela kokufika kuma-20 maximum bese ihoxisa uma ingasetshenziswa, inikezela ngokuhamba okuhlukile. Ifakwe ithusi lokuvala i-valve yazo zonke izibambo, efaneleke kakhulu ukulawula isivinini sokugeleza kwamanzi noma ukucisha amanzi kunoma iyiphi i-spout noma udonga, ukusebenza okulula okukodwa
Uhlobo Lesethaphu: I-Wall Mounted
Ubude obuphelele: 20.23 ″
I-SKU: 2311100B Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: Isikhiphi sekhishi, Isitofu, Wall Mount
ibhodlela lokugcwalisa isikulufu sethempeli uwoyela oxubekile